Budata GRID Autosport maka Windows
Budata GRID Autosport
Free Budata maka Windows (39.00 MB)
Budata GRID Autosport,
GRID Autosport bụ egwuregwu kachasị ọhụrụ na usoro GRID nke Codemaster mepụtara, amaara maka ahụmịhe ya na egwuregwu ịgba ọsọ.
Na GRID Autosport, nke so netiti ihe atụ kachasị nke ọma nọsọ egwuregwu a na-agba ọsọ, ndị egwuregwu na-abanye nọrụ ịgba ọsọ nke onwe ha ma na-esite n ụkwụ na-aga niru nọkwa ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị na egwuregwu ahụ bụ iji merie agbụrụ ahụ iji dọta uche nke ndị na-akwado ya na isonye na agbụrụ ọhụrụ ma meghee ụgbọala ọhụrụ site na nkwado nke ndị na-akwado ha. Na GRID Autosport, ndị egwuregwu nwere ike ịkwa ọfụma nụdị ụfọdụ ma gosipụta nka ha nakụkụ dị iche iche nke nka.
A na-ekekọta ụgbọ ala anyị nwere ike iji na GRID Autosport na edemede 5 dị iche iche. E wezụga ọkọlọtọ ụgbọ ala anyị nwere ike ịhụ nokporo ụzọ, anyị nwere ike ịnya ụgbọ ala egwuregwu dị oke ọnụ, supercars ma ọ bụ ụgbọ ala gbanwere. GRID Autosport nwere ezigbo ịgba ọsọ, gụnyere Istanbul Park. Na mgbakwunye, ịgba ọsọ-egwuregwu a kapịrị ọnụ na-eme ka nchịkọta racetrack GRID Autosport na-eme ka ọ baa ọgaranya.
Na GRID Autosport, ebe ị nwere ike ịnya ụgbọ ala 78 dị iche iche na mkpokọta, eserese dị elu jikọtara ya na ọgụgụ isi na-aga nke ọma. I nwekwara ike igwu egwuregwu ahụ na ọtụtụ egwuregwu na ịntanetị. GRID Autosport kacha mkpa usoro chọrọ:
Windows Vista, Windows 7 ma ọ bụ Windows 8 sistemụ arụmọrụ
Intel Core 2 Duo ma ọ bụ AMD Athlon X2 5400 + processor kụrụ na 2.4 GHz
Intel HD3000, AMD HD2000 ma ọ bụ Nvidia GeForce 8000 usoro eserese eserese
15GB nke nchekwa nchekwa
DirectX dakọtara kaadị
GRID Autosport Ụdịdị
Nha faịlụ: 39.00 MB